ထုတ်လုပ်သူ နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ D.B. Weiss နဲ့ David Benioff
“Game of Thrones” ရုပ်သံစီးရီးရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ နောက်ဆုံး အဋ္ဌမမြောက် Season ကို အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ စာရေးသူတွေနဲ့ ပြန်လည် ရိုက်ကူးပေးဖို့ အသနားခံ လက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေဟာ ၁ ဒဿမ ၅ သန်း ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်သူ နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ D.B. Weiss နဲ့ David Benioff တို့ဟာ တော်တော်လေး ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အမျက်ဒေါသဟာ အဲ့ဒီမှာတင်ရပ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် Disney အနေနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကို နောက်လာမယ့် “Star Wars” ရုပ်ရှင် ၃ ကားကို ရေးသား၊ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကဏ္ဍကနေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုအသစ် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
“Keep ‘Game of Thrones’ Writers Away From ‘Star Wars’ (Game of Thrones စာရေးသူတွေကို Star Wars ကနေ ဖယ်ရှားကြစို့) လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ အဲ့ဒီအသနားခံ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုဟာ သူတို့ ထုတ်လုပ်ရေးမှူး နှစ်ဦး တာဝန်ယူထားတဲ့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်မှာ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ပြီး အမှားတွေကိုလည်း ကျူးလွန်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Benioff နဲ့ Benioff တို့ကို ဝေဖန်ကြတဲ့အထဲ ဇာတ်လမ်း လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ဇာတ်ကောင် အခြေအနေဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကို ယုတ္တိမတန်စွာ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပြီး အဲ့ဒီ အသနား လက်မှတ် ထိုးလွှာထဲမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်အကြီးဆုံး ရုပ်ရှင်စီးရီးကို သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထဲ မအပ်ဖို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“Game of Thrones” နောက်ဆုံး Season ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးပေးဖို့ ကနဦး တောင်းဆိုချက်တွေဟာလည်း လိုအပ်တဲ့ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ Weiss နဲ့ Benioff ကို ထုတ်ပစ်ဖို့နဲ့ တခြားတယောက်ကို အပ်ဖို့ အချိန်ရှိသေးတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ‘Star Wars’ ဇာတ်လမ်းကြီးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖန်တီးနိုင်မယ့်၊ ဇာတ်လမ်းအပေါ် သစ္စာရှိတဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ စာရေးသူနဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေ အများကြီးရှိတဲ့အကြောင်း အသနားခံချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီစာကို ရေးနေချိန် အထိတော့လက်မှတ်ပေါင်း ၁ သောင်း ၃ ထောင်လောက်ရထားပြီး ၁ သောင်းခွဲရရင် အဲ့ဒီအသနားခံချက်ကို ပိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Weiss နဲ့ Benioff တို့ဖက်ကတော့ တခုခုတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
Star Awards “ဇာတ်လမ်းတွဲ အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု”အတွက် ရေပန်းစားနေကြသူများ
Topics: Game of Thrones ၊, Star Wars ရုပ်ရှင်, စီးရီးထုတ်လုပ်ရေးမှူး